I-infographics: Ilungele iTraffic ne-SEO
NgoLwesine, July 1, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ama-infographics abekhona isikhashana kepha muva nje abe yilo lonke ulaka. Ngamasayithi afana ne-Digg afe, abathengisi abafuna ukuthola isikhukhula sezimoto esizeni sabo bafaka ihluzo ezinolwazi ezixoxa indaba enhle. Ngamadola ayizinkulungwane ezimbalwa, ungaqasha inkampani ye-infographic ukuthi ikhiqize isibonisi esinokulungiswa okuphezulu okuchaza inkinga ngokubonakalayo. Inkampani yakwa-Infographic izokwenza ucwaningo futhi umklamo. Ezinye izinkampani ze-Infographic zinezikhokhelo eziqhubekayo.
I-Infographic esihlokweni esivela ku- I-Magnetism yekhasimende:
Kunezinkampani ezimbalwa ze-infographics design laphaya, kufaka phakathi DK New Media, enikezela ngale nsizakalo. Umthamo wegciwane owenziwe nge-infographic enhle yingxenye yendaba kuphela. Njengoba abantu abaningi beshumeka futhi bekhuluma nge-infographic kumabhulogi abo nasezinkundleni zokuxhumana, kuyisu elivelele lokuthumela ama-backlinks kubhizinisi lakho.
Tags: uzibuthe wamakhasimendeinfographicinani le-infographicyini i-infographic
Ukuphathwa Kwemisebenzi Kulula nge-HiTask
Yimina Ngedwa Osekuthanda Ukukhangisa Okudala?
Aug 22, 2012 ngo-6: 49 PM
Ukuhambisana kwe-infographics kukhula nsuku zonke ezinkundleni zokuxhumana. I-ejensi yezentengiso ye-inthanethi engiyikhethile ibingikhombisa izinombolo eziqondile zokuthi zisebenza kanjani ngempela lezi zinto. Okuthunyelwe okuhle!